Teny: Podcast Iray Avy Amin’Ireo Tompondaka Ao Warlpiri · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2011 3:02 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny antontan-kevitray momba ny tafatafa anaty aterineto “Mampiasa ny Fampahalalam-baovaom-Bahoaka Hanandratana Ireo Teny Zara-Raha Misy Mahalala.”
Ry zareo no “Tompondaka.” Anaram-bosotra nomena ny mpianatra ao amin'ny kilasy iray aminà ambaratonga fototra iray any amin'ny tanàna lavitr'andriana any Lajamanu Faritra Avaratr'i Aostralia. Nomena izany anarana manokana izany ry zareo noho ny fahazotoan-dry zareo mankany an-dakilasy hanatrika fampianarana, any aminà faritra iray ao amin'ny firenena izay tena fanamby goavana tokoa ny famdefasana tsy tapaka ny zaza ho any an-tsekoly.
Iray amin'ny tombony ananana raha isan'ny ao anatin'ny kilasin'ny Tompondaka ny fahafahana mahita ireo teknolojia hiaka farany. Hevitra avy amin'ny mpampianatra azy ireo izany, Adrian Trost, izay nihevitra fa ny famoronana podcast iray miaraka amin'ireo mpianatra dia mety hanampy amin'ny fametrahana fandrisika iray fanampiny eo amin'ireo mpianatra ary tena hanampy hanosika azy ireo hifikitra amin'ny sekoly. Ny ankizy no misafidy sy manoratra ny drafitra ho an'ireo podcast isam-bolana. izay manasongadina dinidinika ifanaovana amin'ireo mpikambana, tatitra momba ny hetsika ataon'ny sekoly, ary hatramin'ny fanalàna hamohamo isaky ny andiany.
Sarin'ireo ankizy mpandefa podcast ao Lajumanu. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Maro amin'ireo mpianatra ao amin'ny Tompondakan'i Lajumanu no manam-piaviana zanatany hiringiriny na ilay antsoina hoe Aborigène, izay mianatra ny teny Anglisy ho tenim-pirenena faharoa. Raha ny hampiroborobo ny fifehezana ny teny Anglisy no isan'ny tanjona ifantohan'ny sekoly, ny podcast kosa dia manome vintana iray hahafantarana ny tantaran'ny faritra izay toy ny trano fonenan'ny vahoaka Warlpiri. Ny ampahanà podcast tsirairay dia manasongadina ny Warlpiri izay anehoan'ny mpianatra roa ny fahaizany ny tenim-pirenena Anglisy, ary arahan'ny fandikàna izany ho amin'ny teny Warlpiri, izay vinavinaina ho olona 2500-3000 eo ho eo no miteny azy. Na ny mpianatra na ny mpampianatra dia samy miteny fa io no isan'ny ampahany tena ankafizin-dry zareo amin'ny dingana famoronana ny podcast sy iandrasany ny ampahany manaraka. Misy ireo mpianatra izay ny teny Anglisy no teny fiteniny voalohany indrindra, ka ny fianarana ny teny Warlpiri dia làlana iray fanampiny mba hahafahan-dry zareo mahatakatra bebe kokoa ireo mpiray kilasy aminy.
Henoy ny ampahany amin'ny fanehoana ny teny Warlpiri avy amin'ny Podcast nataon'ireo Tompondakan'i Lajumanu: [feo: http://www.archive.org/download/SnippetOfWarlpiriDemonstration/WarlpiriDemonstration.mp3]
Afaka misoratra amin'ny fàhana podcast ihany koa ianao eto.
Efa nahasarika ny fifantohan-tsain'ny teratany sy manerana ny firenena sahady ilay podcast, ary i Adrian dia miteny hoe,
Antenainay fa ny zavatra toy ny podcast sy ny tranonkala dia afaka hitarika mankany amin'ny fanairana ny aingam-panahin'ny hafa.
Fantaro misimisy kokoa ny asa vitan'i Adrian miaraka amin'ny podcast amin'ny teny Warlpiri avy amin'ireo Tompondaka ao Lajumanu, ao amin'ny tafatafa anaty aterineto “Mampiasa ny Fampahalalam-baovaom-Bahoaka Hanandratana Ireo Teny Zara-Raha Misy Mahalala” hatao ny 16-22 Novambra. Raha hitsidika ny tranonkalan'ireo Tompondaka ao Lajumanu, potsiro eto.